China DC Motor Linear Actuator FD13 IP66 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Na-adị ọcha
Igwe Igwe TV Igwefoto- 26 ”...
FD13 Linear Actuator yiri nke FD1 actuator, nnukwu ihe dị iche bụ ọkwa IP. FD13 linear actuator nwere nnukwu nchedo gburugburu-IP66 na obere mkpọtụ. Ezubere ihe eji arụ ọrụ IP66 a iji guzogide uzuzu uzuzu zuru oke na nchebe megide ikpughe mmiri. Ọ na-ọtụtụ-eji ọgwụ na ahụ ike, ngwá ụlọ, home akpaaka na ụlọ ọrụ, dị ka ihe atụ ọgwụ ndina, eze oche.
Xlọ ọrụ Sanxing Na-enye Gị
1. AKWACKWỌ AKWACKWỌ KWESECTR F KWESECTR..
2. ỌR N NKE.
3. Ngwa ngwa mbupu n'ime 7 YBỌCH..
4. EBEGH MO MOQ, 1 PC OK.
5. Akwụkwọ ikike oge 12-ọnwa.
6. Nabata OEM & ODM IWU.
6000N (Push) / 4000N (Kpoo)
Speed ​​(No Ibu Ibu)
Nkeji Ntinye Anya (A)
strok + 175mm
10%, kwusi maka nkeji iri na asatọ mgbe arụchara ọrụ oge abụọ
Wuru na-, factory preset
+ 5 ° C ~ + 40 Celsius
Ntughari 90 dị
Nwa / Grey
Rịba ama maka ịtụ
(1) Biko tinye n'ihu ihe ngosi linear actuator, ọrịa strok, weghaara ogologo, ikike ibu, ọsọ na voltaji. Ọ bụrụ na ndị ọrụ nwere ihe pụrụ iche chọrọ na ojiji nke gburugburu ebe obibi na teknụzụ data, anyị factory nwekwara ike chepụta n'ihi na ị, na ị ga-egosi kpọmkwem chọrọ mgbe ịtụ ihe.
(2) Ọ bụrụ na ndị ọrụ chọrọ linear actuator ngwa, dị ka akara igbe, ọkọnọ ike na ime akara, anyị factory nwere ike na-enye a zuru set, ọ nwekwara ike-ọnọ naanị.
(3) Site na ụbọchị nke nnyefe n'ime ọnwa 12, na nkịtị ọnọdụ, na linear actuator àgwà mbipụta mere site n'ibu ọdịda ma ọ bụ mmebi, anyị factory bụ maka mmezi.
1. Enwere ike iji FD13 na-eme ihe n'èzí?
Ee, mmiri ozuzo dị mma, ọ ga-aka mma ka ejiri ya n'okpuru mmiri.
2. Enwere m ike ịzụta ihe nlele iji nwalee mbụ?
Ee, anabatara 1 sample.
3. Banyere onye na-eme FD1 na FD13, kedu nke ka mma?
Ọ bụrụ na ị jiri ya n'ọnụ ụzọ, anyị na-akwado gị ka ị jiri FD1 actuator, ya max. ibu ibu 6000N, otu ihe dika FD13, ya mere o kariri onu ogugu. Ọ bụrụ n ’iji ya n’èzí ma ọ bụ chọọ ya mmiri na - adịghị, FD13 bụ ezigbo nhọrọ, mana ọnụ ahịa ya ka elu.
Nke gara aga: Ọsọ ọsọ ọsọ na-arụ ọrụ sịlịnda FD9
Osote: FA Pkwụ Pedal Gbanye
DC obere Linear Actuator
Onye na-arụ ọrụ n'ahịa
Linear Actuator Na Encoder
Micro Linear na-arụ ọrụ
Sochie Linear Actuator 12v 24v FD3
Linear sịlịnda Actuator FD8
Nzaghachi Obere ọkụ eletrik FD5-DW
Ọsọ ọsọ ọsọ na-arụ ọrụ sịlịnda FD9
Bedlọ ọgwụ Bedlọ Ọgwụ Bedlọ, High Speed ​​Linear Actuator, Micro Linear na-arụ ọrụ, Njikwa Remote Medical, Electric Bed Ndina Remote, Ikuku Remote Control N'ihi Hospital,